Waa tee kooxda Real Madrid ka afduubanaysa saxiixa Weeraryahanka Tottenham ee Christian Eriksen? – Gool FM
(London) 20 Okt 2019. Paris Saint-Germain ayaa la soo warinayaa inay ka afduubanayso Real Madrid saxiixa Weeraryahanka kooxda Tottenham Hotspur ee Christian Eriksen.
Xiddiga xulka qaranka Denmark ayaa heshiiskiisa haatan ee Spurs waxa uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedkan 2019-20, waxaana ay umuuqataa in 27-sano jirkaani uu ka tagayo kooxda Macallin Mauricio Pochettino, isagoo raadinaya tartan cusub.
Real Madrid ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inay u dhaqaaqi doonto da’yarkii hore ee Ajax intii lagu guda jiray suuqii kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga, waxaana la fahamsan yahay in kooxda reer Spain ay weli xiisaynayso xiddigan.
Si kastaba ha noqotee, Wargeyska Daily Mail, ayaa warinaya in koxoda PSG ay isha ku heyso inay la soo wareegaan Dane, kaasoo u muuqan kara inuu heshiis hordhac ah la saxiixdo koox ajnabi ah inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Wararku waxa ay intaa ku darayaaan in Spurs ay isha ku heyso inay iska iibiyaan Eriksen bilowga sanadka 2020, inkastoo weeraryahanku ay u badan tahay inuu diido ka tagista bartamaha xilli ciyaareedka, isagoo doorbidaya inuu si xor ah uga dhaqaaqo xagaaga soo socda.
Kooxda Manchester United ayaa sidoo kale la sheegay inay si dhow isha ugu hayso isbedellada xiddigaan aan saldhigan.